३३ दिनदेखि बेपत्ता मन्दिराको शव तमोर नदीको किनारमा भेटियो - Everest Dainik - News from Nepal
३३ दिनदेखि बेपत्ता मन्दिराको शव तमोर नदीको किनारमा भेटियो
ताप्लेजुङः आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–२, की १९ वर्षीया मन्दिरा अधिकारीको शव भेटिएको छ ।
अधिकारीको शव बेपत्ता भएको ३३ औँ दिन तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–७ मा तमोर नदीको किनारमा भेटिएको हो ।
स्थानीय मछुवाले नदी किनारका शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुयाँलले बताए । गएको मंसिर १७ गते आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–३, हाङपाङका रमेश अधिकारीले मृतक मन्दिराको हत्या गरेर तमोर नदीमा फालेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए । त्यसै बयानका आधारमा शवको खोजी भइरहेको थियो ।
शव फेला परेपछि मन्दिराका आफन्तलाई प्रहरीले खबर गरेको र आफन्तहरु हातका बाला, लुगा, कानका टपको आधारमा शव मन्दिराकै भएको सनाखत गरेको डीएसपी फुयाँलले बताए ।
याे पनि पढ्नुस ताप्लेजुङकाे सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने
अनुहार भने चिन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको शवलाई पोष्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल पाँचथर लगिँदै गरेको पनि डीएसपी फुयालले जानकारी दिए ।
घटनामा संलग्न रमेशको मंसिर २५ गते विवाह तय भएको थियो। विवाहका सामान खरिद गर्न उनी मंसिर १७ गते फुङलिङ बजार गएका थिए। बजारबाट फर्कने क्रममा पीडितलाई सम्पर्क गरी पुलमा भेट्ने योजनाअनुसार भेट भएको थियो। भेटका क्रममा विवाहबारे विवाद भएपछि हत्या गरि झोलुंगे पुलबाट नदीमा हालिदिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनापछि रमेशले आफू अपहरणमा परेको र असुरक्षा भएको भन्दै आफ्नै परिवार तथा प्रहरीलाई झुटो जानकारी दिएका थिए। मन्दिरा वेपत्ता भएको र रमेशले आफू अपहरणमा परेको दिन एकै भएपछि अनुसन्धान रमेशतर्फ मोडिएको प्रहरी नायव उपरिक्षक ज्ञानेन्द्र फुयाँलले बताए।
याे पनि पढ्नुस हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा पनि डेंगु भेटियो !
याे पनि पढ्नुस विवाहको प्रस्ताव राख्दा हत्या !
ट्याग्स: ताप्लेजुङ, मन्दिरा अधिकारी